Air Austral dia manangom-bola ao amin'ny Air Madagascar: Fahafahana iray ao amin'ny Nosy Vanilla
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Air Austral dia manangom-bola ao amin'ny Air Madagascar: Fahafahana iray ao amin'ny Nosy Vanilla
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Vanilla Air Airal avy any Reunion sy Air Madagascar dia nanamafy fa efa nahavita sy nanao sonia fifanarahana izay ahazoan'ilay mpitatitra entana an-trano frantsay any Reunion fahazoana 49 isanjato ny zotram-pirenena Madagascar.
Araka ny voalaza tetsy aloha, moa ve ny orinasam-pitaterana roa dia nampahafantatra fa ny fiarahan'izy ireo dia hanatsara ny fifandraisan'ny rivotra eo amin'ny nosy ary indrindra ny fifamatorana lavitra ho an'i Madagasikara sy La Réunion.
Indraindray ny fifampiraharahana dia nofaritana ho toy ny fanamby satria nandeha hatramin'ny volana aprily tamin'ity taona ity fa tsara daholo izay mifarana tsara. Drafitra fandraharahana amin'ny antsipiriany no nifanarahana teo amin'ireo mpiray antoka, nametrapetraka ny lalana hamadihana ny haren'ny Air Madagascar tao anatin'ny roa taona ho avy. Tsy latsaky ny 40 tapitrisa Dolara amerikana no hampidirin'ny Air Austral ao amin'ny Air Madagascar hanome renivohitra miasa fanampiny.
Air Austral dia hanana fitantanana ambony faharoa atsy ho atsy ho an'ny Air Madagascar na dia hifehy ny birao sy hametraka ny filohan'ny birao aza ny governemanta eto Antananarivo.
Anisan'ny fanoloran-tenan'i Madagasikara ihany koa ny fanatsarana ny seranam-piaramanidina iraisampirenena sy seranam-piaramanidina hafa manerana ny nosy midadasika.
Ny Air Madagascar amin'izao dia misidina mankany amin'ny toeran-tany 12 sy toeran-tany 7 hafa manerana ny Ranomasimbe Indianina, mankany Chine sy France.
Ny firenena COMESA dia maniry ny fanalalahana ny habakabaka
The Hotel Peabody: Tranon'ny martsa an'ny gana